झापामा ‌ओली र प्रचण्डको स्वास्‍थ्य परिक्षण गरिने ! « Deshko News
झापामा ‌ओली र प्रचण्डको स्वास्‍थ्य परिक्षण गरिने !
काठमाडौ‌ंं, कार्तिक २४
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वास्थ्य परीक्षण झापामा एकैपटक गरिने भएको छ । बिर्तामोडमा मंसिर २ गतेदेखि आयोजना हुन लागेको पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सवमा ओली र प्रचण्डको स्वास्थ्य जाँच गरिने भएको हो ।
बिर्तामोडको बी एण्ड सी टिचिङ हस्पिटलले मंसिर २ देखि ८ गतेसम्म ६ दिन महोत्सव सञ्चालन गर्ने भएको छ । हस्पिटलले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सवको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रुपमा गर्ने जनाएको हो ।
स्वास्थ्य महोत्सव उद्घाटनका दिन दुबै नेताको एमआरआई गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले बताए । हस्पिटलमा अत्याधुनिक प्रविधिका उपकरण भएकाले दुबै नेताको शरीर पूरै जाँच गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको प्रसाईंले सुनाए ।
‘महोत्सवले मेची अञ्चलबासीलाई फाइदा पुग्नेछ,’ हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने, ‘महोत्सवमा १० हजार जनाले स्वास्थ्य सेवा लिने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ स्वास्थ्य महोत्सवका अवसरमा हस्पिटलले सिटी स्क्यान, एमआरआई, रेडियोलोजी लगायतमा १५ प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ ।
ल्याबमा र शल्यक्रियामा २० प्रतिशत, औषधि खरिदमा १० प्रतिशत र ओपीडी निःशुल्क गरिएको हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमिश गिरीले जानकारी दिए । महोत्सवमा विभिन्न स्थानबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु आउने जनाइएको छ । बी एण्ड सी हस्पिटलमा रहेका विभिन्न रोगका ८२ जना डाक्टरले पनि महोत्सवमा सेवा पु¥याउने छन् ।
महोत्सव सम्पन्न गर्नका लागि २ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको प्रसाईंले बताए । ‘महोत्सवमा स्वास्थ्य जाँच गराउन आउन चाहनेहरुका लागि निःशुल्क यातायातको सुविधा छ,’ प्रसाईंले भने, ‘त्यस अवधिमा नाम टिपाउनेले पछि पनि सेवा लिन सक्नेछन् ।’-नयाँ पत्रिका